War-bixin: Ajandaha rasmiga ah ee golaha wakiillada Puntland ay ka shaqaynayaan Kalfadhigan oo la qaybiyay – Kalfadhi
Golaha wakiillada Puntland ayaa maanta yeeshay kulankoodii labaad ee kalfadhiga 44raad ee golaha, kaas oo baarlamanka loogu qaybiyay ajandaha rasmiga ah ee kalfadhiga oo goluhu shalay meel-mariyay.
Hawlaha horyaala golaha wakiillada mudada Kalfadhigan waxaa ka mid ah ka doodista badeecadaha waxyeelaynaya dhaqaalaha Puntland kuwaas oo ka imanaya Soomaaliland, xili ay jirto xiisad xoog leh oo u dhexaysa labada dhinac.
Goluhu wuxuu kaloo ka hadli doonaa shaqaalaha ajinebiga ah, mudada lagu jiro Kalfadhiga, iyadoo warbixinno laga dhegaysan doono guddiyada baarlamanka oo labadii bilood ee u dambeeyay kulamo la lahaa hay’adaha ay la xisaabtanka ku leeyihiin.
Waxaa sidoo kale baarlamanku doodo xoog leh ka samayn doonaa arrimaha dastuurka iyo federaalka Soomaaliya.
Ajnadaha waxaa ku xusan in goluhu ka hadli doono heshiiyada xukuumadihii hore ay galeen iyo dhaqangalkooda, arrintaas oo taaban doonta heshiisyo waa weyn sida kan dekedda Boosaso oo maamulkiisa lagu wareejiyay shirkadda P & O DP-World.
Hargaysa: Xukuumadda Somaliland oo bil kadib xabsiga ka sii daysay xildhibaan Dhakool